Munamato wekubhadharwa mari. ? Kuti ubhadharwe nhasi!
Munamato wekubhadhara mari Sechombo chemweya chatinogona kushandisa pese patinochida, chakakosha zvikuru sezvo rubatsiro rwemweya kuitira kuti tigare tiine hukama hwakanaka neshamwari uye nemhuri zvinodikanwa, kunyanya kana paine nyaya dzemari dzakabatanidzwa.
Kukweretesa mari kune mumwe kunoda kuvimba uye ndosaka kuve neruzivo rwekunamata rwekuita sarudzo dzemari zvakanaka, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti bhizinesi richava nemazano akanaka uye kuti hushamwari hahuzotambura.
Minamato inogona kuva iyo chakavanzika asi chakasimba kwazvo chombo kuti ubude mumatambudziko kana matambudziko iwayo atinofunga kuti akaomarara kusiya asina kukuvadzwa.
1 Munamato wekubhadhara mari kuti Ubhadharwe Chii?
2 1) Munamato wekudzosera mari yakakweretwa
3 2) Munamato wekubhadharwa
4 3) Munamato unoshanda wekuunganidza mari
4.1 Munamato uyu wekubhadharwa mari une simba chaizvo here?
Munamato wekubhadhara mari kuti Ubhadharwe Chii?
Nemutongo uyu chikonzero chakajeka kwazvo asi kwete chete che kuripwa mari asi kuti izvi zvidzimbiswe nokuzvidira uye pasina chikonzero chekupinda mumatambudziko makuru nemumwe munhu. Iyo inoshandiswa pane dzimwe nguva kana mamiriro ezvinhu anga ave asina kugadzikana.
Haingogumiri pamamiriro ekukwereta chete asi kana takamirira kumwe kubhadharwa kwebasa redu kana chimwe chinhu.
Eya muripo wevashandi urwo unosara sevasungwa, tinokwanisa kuvasunungura nekuita munamato une simba.
1) Munamato wekudzosera mari yakakweretwa
Senhor, meu pai, imi mune simba rose, kutanga kwezvose, ndinokutendai nemakomborero amunondipa zuva nezuva, hupenyu hwepeel, peel saúde, vhudzi rakarodzwa uye nevhudzi rakapfeka;
Nditorese kubva kwauri semufirimu uye nekuzvininipisa ini Peço kuti mamiriro aya ari kundishungurudza zvakanyanya, unondibatsira ku (zvinonzi kana zvisina kukwana da pessoa) Ndibhadhare kana dinheiro kuti eu de boa kutenda uye nerupo bhizinesi.
Kunzwisisa nguva dzose uye kuziva kuti zvinogara zvichidikanwa kubatsira Nossos irmãos em halies kugona kupfuurira kundibatsira semelhantes, assim mesmo kukwanisa kutevera desígnios yavo.
Tudo isso eu te peço em nome of Deus pai, Deus filho na Deus Espírito Santo.
Izvo zvakakosha kuti unamate munamato uyu kuitira kuti vakubhadhare mari nekutenda.
Mikana yebhizinesi inowanzo kuenderana nemamiriro ezvinhu akaoma.
Tiri munzanga umo kutsvaga kuzvibatsira pachako kunoratidzika kunge kuri injini yeazhinji, kazhinji vanhu vanokumbira zvikwereti zvemari kuti vatore njodzi mumabhizinesi asingawanzo kufamba zvakanaka uye vanopedzisira vatakura chikwereti chakawanda nematambudziko
Mumamiriro ezvinhu aya apo tinoda imwe mari yakakweretwa kuti idzoserwe kwatiri, tinogona kutendeukira kune iyi chombo chine simba neicho chatichaona mhinduro mukati menguva diki kupfuura yatinofunga.
2) Munamato wekubhadharwa
Wemasimbaose uye ane tsitsi Mwari akapa mukunamata kwako kutsveneswa kwaJosé Gregorio de la Rivera, akafanotemerwa nemufiri kubva pakati peGorogota ...
Ipapo chakasimbiswa neVictoria kuve muchengeti wematunhu evanonamata, muchengeti wemari yavo, zvishongo zvavo nematombo erombo rakanaka, chipo chekuvaita kuti vatipe mari yavanotikweretesa. Kuziva hunhu hwawakaisirwa mari, ndinouya kwauri kuzokubvunza ...
(Ita chikumbiro chako) Ndapota, ndapota, José Gregorio de la Rivera.
Ndibatsireiwo kuti ndisvike kubva kuna She izvo zvandinokumbira mumunamato uyu kuti ndiwane kukudzwa kukuru uye nembiri yenyu uye nekubatsira mweya wangu. Ndapota San José Gregorio kuti zita rako rizivikanwe uye kuita vateveri vazhinji vechikonzero chako.
Zvese zvaunondiitira zvakanaka, ndinovimbisa kuzviitirawo vamwe. Ini ndichashanyira kereke nomwe uye ndinamate Mapisarema amakaratidza. Ini handishuve munhu zvakaipa, asi ingo dzosera chikwereti changu.
Muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene.
Mutsvene Maria, tidzivirire.
Nemunamato uyu kuti undibhadhare uye kuti ndiwanezve mari yechikwereti isu tinosunungura mari yatakapihwa kubva kwatiri chero mamiriro ezvinhu.
Munzvimbo dzemudenga hondo dzakakosha dzinorwiwa uye nzvimbo yemari ndeimwe yedambudziko rakakura kwazvo iro munhu aripo sezvo richisanganisira zvinodiwa panyama, hukama hwevanhu uye mamwe mamiriro ezvinhu anogona kutorwa seakaoma.
3) Munamato unoshanda wekuunganidza mari
Nhasi ndinoparidza munamato uyu kudenga iwe
Ndibatsireiwo mumaawa asingaperi mairi umo
Handina kuwana zvandinoda;
Nhasi, uye kunyangwe zvangu ndichiita moyo munyoro.
Ndatendeuka kumashure uye ndakatadza kupora
Mari yaive yechikwereti kwandiri.
Naizvozvo, baba vekudenga, ndinouya kuzokubatsira
Kuti iwe undisunungure pane izvi zvinoshungurudza
Uye gadzira uya wandakabatsira
Panguva chengetedza izwi rako uye neni
Gadzirisa chikwereti chatakabvumirana pane imwe nguva yapfuura.
Ndiwe chete mungaite kuti ndibude mukukunda
Kubva pane kusangana uku, kubva pachiyero che Kururamisira
Ini ndinokumbira kuti utore chikamu mumweya, hana uye hutsika
Nezvenyaya iyoyo uye izvo, zvinofambiswa nemicheka yako, iye
Ini ndakabhadhara iyo mari yakakweretwa ini ndisina
Pane kusimbirira pane izvozvo.
Ini ndinosiya ichi chikumbiro mune dzenyu dzvene kuda uye ndinovimba
Kutora kuunganidza hakuzi chinhu chiri nyore. Tinofanira kuziva nezve izvo zvinodiwa kubva kumuvakidzani wedu kana achida kubhadharwa kwekubhadhara kana quota yemari yakambobvumidzwa.
Munamato unoshanda uyu wekuunganidza mari, pamwe nekutibatsira kuti zviitwe zvinobatsira, unozadza isu nehungwaru kushandisa mazwi akakodzera paunenge uchibhadhara.
Pamusoro peizvi zvese, yeuka kuti izwi raMwari rinotidaidza kuti tisaite izvo zvatisingade kuti zviitwe kwatiri, iri musimboti uyo unozivikanwa semutemo wegoridhe uye uyo watinofanira kuyeuka pamusoro pazvo rwese rudzi urwu rwebasa. Uyu uye chero mumwe munyengetero watinogona kuita uchaita kuti tinzwe kuswededzwa pedyo naIshe uye izvo zvinotizadza nehunyanzvi uye hwevanhu kana tichigadzira chero kuunganidza.
Munamato uyu wekubhadharwa mari une simba chaizvo here?
Zvechii una oración Izvo zvine simba izvo zvaunofanirwa kuita kutenda kubva pamoyo nekuti ichi ndicho chinhu choga chinodiwa kuti kubva pakutanga kusikwa kwenyika chakumbirwa kuitira kuti minamato inoshanda uye ine simba Denga rakagadzirwa kuburikidza nemazwi uye ndosaka tichifanira kuita zvikumbiro zvedu kubva kumweya asi neruzhinji mutoro uye tichiziva zvatiri kukumbira, ivo vari kuwira mukuzvifunga, vachigara vachifunga nezvevamwe vedu varume kwete isu kana isu. Zvakanakira isu pachedu.
Kana tichiita izvi zvirokwazvo minamato yatinoita ine simba zvikuru pasina chikonzero chekuvhenekera makenduru kana kugadzirira nharaunda dzinokosha dzemunamato.
Gadzira zvakanyanya simba rekunamatira. Saka vanokubhadhara mari.